Vaovao Tsy Tsara Ho An’ny Mahantra Ao Hong Kong Ny ‘Trano Sahaza Ny Moka’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Septambra 2016 13:15 GMT
Ahoana no “voafandrika” ao anaty efi-trano mizarazara ireo mahantra ao andrenivohitra. Sary avy amin'i Benny Lam. Tsy azo ampiasaina amin'ny resaka ara-barotra.
Maro aminareo no mety efa nandre fa ny tsenan'ny fampialofana ao Hong Kong no tena lafo indrindra manerantany. Ahoana marina no fiantraikan'izany fahalafosan'ny tany aman-trano izany eo amin'ny fiainan'ny olona?
Eny, mivangongo ao anaty efi-trano mizarazara ratsy rafitra, malaza eo amin'ny vahoaka ho trano “natao ho an'ny moka” ny ankamaroan'ny sarangan'ny mpiasa an-tanandehiben'i Hong Kong.” Ankehitriny, mba haharatsy kokoa ny raharaha, mividy trano mitovy habe amin'ny lay ody moka ny mpanankarena hanaovana fitadiavam- bola, noho ny politikan'ny governemantan'i Hong Kong momba ny tsenan'ny fampialofana. Mazava ho azy fa tsy fambara tsara ho an'ny mahantra izany.
Jereo fotsiny ny vidin'ny fananganana trano fonenana natomboka vao haingana One Prestige ao North Point, distrika ara-barotra sy toeram-ponenana ao amin'ny nosy Hong Kong. Ahitana efitra 128 ny tranobe ary efitra efa misy fanaka mirefy 15 ka hatramin'ny 20 metatra toradroa. Mitovitovy habe amin'ny haben'ny toeram-piantsonan'ny fiara antonontonony iray izany. Eo akaikin'ny latabatra ao an-dakozia misokatra ny fandriana araka ny drafitry ny efitra eo amin'ny sary etsy ambany.
Saingy tsy midika fahamorana ny hakelin'ny velarana asehon'ny sary. Amidy hatramin'ny 24.000 dolara Hong Kong, eo ho eo amin'ny 3.094 dolara Amerikana ny iray “hakiho” toradroa (0,092903 metatra toradroa). Ny efitra kely indrindra izay mirefy 15 metatra toradroa dia amidy hatramin'ny 3,9 tapitrisa dolara HK, mihoatra ny dimy hetsy dolara Amerikana. Ankoatra izany, ny saran'ny fitantanana isam-bolana isaky ny toradroa dia manodidina ny 5.60-7.60 dolara HK, izay midika hoe tsy maintsy mandoa eo amin'ny 1,000-1,200 dolara HK, na 120-150 dolara Amerikana eo any amin'ny mpandraharaha isam-bolana ny mpividy ny efitra kely indrindra.
Drafitry ny rihana misy ny efitra kely indrindra ao amin'ny One Prestige. Nalaina tamin'ny sarin'ny Apple Daily.
Tamin'ny 2015, tetikasa trano fonenana [sahaza ny moka] telo mitovitovy no natomboka. Isaky ny fanorenana, mihena ny habeny kanefa miakatra haingana ny vidiny. Manamarina ny tetikasany ireo mpandraharaha tamin'ny filazàna fa ambony ny tinadin'ny tsenan'ny trano kely velarana antanàn-dehibe ary hampitombo tokoa ny tolotra ny fanamboarana efitra sahaza moka. Mifanaraka amin'ny politikan'ny governemanta momba ny tany ihany koa ireo tetikasa ireo izay mandrisika ny mpandraharaha mba hanorina trano avobe ao amin'ny tany kelikely ao ao amin'ny toeram-ponenana ao an-drenivohitra izay efa hipoka mba hanatrarana ny tanjona trano vaovao miisa 480.000 ao anatin'ny 10 taona. Latsaky ny 500 metatra toradroa ny sombin-tany sasany, nopetahan'ny mponin'i Hong Kong anaram-bosotra hoe “mitovy amin'ny fanjaitra” ireo tranobe feno efitra fonenana ireo.
Voalaza fa hanangana trano fonenana kely miisa 5.000 ampidirina ao anatin'ny tsena isan-taona mandra-pahatongan'ny taona 2019 ny tanàna. Na izany aza, tsy mamaly ny filàn'ny mponina ao an-toerana, fa mamaly ny tombontsoan'ny mpampiasa vola ny tetikasa. Mpampiasa vola ny 70 isan-jaton'ny mpividy efitra fonenena kelikely lafo vidy.
Mba hiverenan'ny vola nampiasaina amin'ny fampiasam-bolan'izy ireo, hatramin'ny 80 dolara HK ny hofan-trano isam-bolana isaky ny iray “hakiho” toradroa (0,092903 metatra toradroa) ao amin'ny One Prestige, izany hoe ny hofan-trano isam-bolana ho an'ny efitra kely indrindra dia 13.040 dolara HK, na 1.678 dolara Amerikana. Toa tsy azo ihodivirana fa hanaratsy kokoa ny tsenan'ny fanofana trano efa ratsy ao an-drenivohitra ny halafosan'ny hofan-trano tahaka izao.
‘Tsy olana mifandraika amin'ny fahantrana ihany, fa olana ara-tsosialy misy lanjany ihany koa’
Manana tinady maro dia maro amin'ny efitrano fonenana kelikely ao amin'ny faritra antanandehibe tokoa i Hong Kong, saingy avy amin'ny fianakaviana mahantra fa tsy ny tanora saranga antonony ny tinady.
Araka ny tatitry ny departemantan'ny antontanisan'ny governemanta ao Hong Kong, olona eo amin'ny 200.000 eo no monina ao amin'ny efitra mizarazara 88.800 tamin'ny taona 2015. Velarana 5,8 metatra tora-droa no toeran'ny isan'olona amin'ny ankapobeny. Ny taha ankapoben'ny vola miditra isam-bolana amin'ny tokantrano dia 12.500 dolara Hong Kong, ary ny hofantrano aloa isam-bolana dia 4.200 dolara Hong Kong.
Matetika tena ratsy ny fepetra iainana ao amin'ireo efitra misaratsaraka ireo. Nandinika ny tetikasany tao amin'ny Facebook i Benny Lam, mpaka sary nandany roa taona nakana ny sarin'ireo mponina mahantra ao tanàndehibe monina amin'ny efitrano bitika:
Nandritra ny roa taona farany, naka sary ny fari-piainana ratsy ao Hong Kong aho. Ny sary rehetra nalaina tao amin'ny distrika fahiny dia manempotra ara-bakinteny, nahita aho fa zaraina ho efitra kely be dia be ny trano iray: tsy misy varavarankely hidiran'ny rivotra; ary fohy loatra ny fandriana, tsy ahafahan'ny vatana mitsotsotra.
An'aliny ireo fianakaviana kely fidiram-bola monina ao amin'izany toerana manempotra ao Hong Kong izany. Mety manontany tena ianao hoe inona no hiraharahiantsika an'izany, satria tsy miaina miaraka amintsika ireo olona ireo. Na izany aza, tiako ny milaza aminao fa olona tonga eo amin'ny fiainanao isan'andro izy ireo: miasa ho anao ho mpanome sakafo any amin'ny trano fisakafoanana hihinananao izy ireo, mpiambina eny amin'ny toeram-pivarotana lehibe falehanao izy ireo, na mpamafa lalana sy mpanatitra entana eny amin'ny lalana fandalovanao. Ny hany maha samihafa antsika amin'izy ireo dia efitra kely mizarazara ny tranon'izy ireo, na baoritra mirefy 1,8 x 0,6 metatra monja. Aorian'ny asa lehibe sy mandreraka, dia zara raha ampy ahafahana miaina amin'ny toerana kely tahaka izany ny vola azon'izy ireo. Mino aho fa tsy olana ara-pahantrana ihany izao, fa olana ara-tsosialy goavana ihany koa.
Ny antony mahatonga ireo olona sarangan'ny mpiasa ireo misafidy hiaina ao anatin'ny tontolo mampivonkona hozatra izao dia noho izy ireo eo amin'ny sehatry ny servisy ary tsy maintsy miasa mandritra ny ora maro mba hahazo karama kely. Afaka manavotra azy ireo amin'ny fandehanana fiara lalana adiny roa eo ny miaina ao afovoan-tanàna ary ahafahana mitahiry eo ho eo amin'ny 30-40 dolara HK (5 dolara amerikana) isan'andro laniana amin'ny fitaterana. Ka tsy hanampy azy ireo mihitsy ny fitomboan'ny tolotra efitra antonona moka lafo vidy ao an-tanandehibe.
Mifanohitra amin'ny noeritreretina ankehitriny no hita, niteraka fiakaran'ny hofan-trano ho an'ny efitra kelikely ny fitadiavana fampiasam-bola ary mety hiteraka fiakaran'ny hofan-trano amin'ireo efitra an-tanandehibe nozarazaraina ihany koa. Ny zavamisy, nahitam-piakarana 10 isanjato ny hofan-trano ankapobeny amin'ny efitra nozarazaraina teo anelanelan'ny taona 2013 ka hatramin'ny taona 2015, ary atahorana hitohy izany raha tsy ampitomboin'ny governemanta ny tolotra fampialofana takatry ny vahoaka.
Ho atao fampiratiana ao amin'ny Foiben'ny Zavakanto Hong Kong amin'ny 3 ka hatramin'ny 9 Oktobra ho avy izao ireo sarin'i Benny Lam momba ny fampialofana ifotony ao Hong Kong.